अपि पावर कम्पनीको हकप्रद शेयर आजबाट बिक्री खुल्ला ! - Arthasansar
अपि पावर कम्पनीको हकप्रद शेयर आजबाट बिक्री खुल्ला !
विहीबार, १३ कार्तिक २०७७, १७ : ५९ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं – अपि पावर कम्पनी लिमिटेडलेको हकप्रद शेयर आज (कात्तिक १४ गते शुक्रबार) देखि निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला भएको छ ।
कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन प्रयाेजनकाे लागि कम्पनीले २०७६ साल चैत्र १ गते शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द (बुक क्लोज) गरेकाे थियाे । त्यसैले, २०७६ साल फागुन ३० गतेसम्म नेप्सेमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र यस हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उक्त हकप्रदमा लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले आज कार्तिक १४ गतेबाट मंसिर ४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीकाे हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ।
थप जानकारीको लागि भिडियो हेर्नुहोस्: